Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha dharka ilaalinta la tuuri karo ee Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Ilaalinta > Dharka ilaalinta la tuuri karo
Dharka ilaalinta la tuuri karo waxaa loola jeedaa dharka difaaca ee ay isticmaalaan shaqaalaha caafimaadku (dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha caafimaadka, shaqaalaha caafimaadka dadweynaha, shaqaalaha nadaafadda, iwm.) iyo dadka galaya meelo gaar ah oo caafimaad iyo kuwo caafimaad ah (sida bukaanada, booqdayaasha isbitaallada, iyo dadka galaya meelaha uu cudurka qabo, iwm.) .) Shaqadeedu waa inay go'doomiso bakteeriyada, boodhka ultrafine ee waxyeelada leh, aashitada iyo xalalka alkaline, shucaaca elektromagnetic, iwm., si loo hubiyo badbaadada shaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka nadiif.
Ilaalinta: Ilaalintu waa wax qabadka ugu muhiimsan ee looga baahan yahay Dharka ilaalinta la tuuri karo, inta badan ay ku jiraan carqaladaha dareeraha ah, xannibaadaha microbial iyo xannibaadaha walxaha. Caqabadda dareeraha ah macnaheedu waa in dharka difaaca caafimaadku uu awood u yeesho inuu ka hortago gelitaanka biyaha, dhiigga, khamriga iyo dareeraha kale, oo leh qulqulo nacayb ka badan 4, si aanay u wasakhayn dharka iyo jidhka bini'aadamka. Ka fogow dhiiga bukaanka, dareeraha jidhka iyo dheecaanka kale inta lagu jiro qaliinka si aad fayraska ugu qaado shaqaalaha caafimaadka. Caqabadda microbial-ka waxaa ka mid ah iska caabinta bakteeriyada iyo fayraska. Caqabadda ugu weyn ee bakteeriyadu waa in laga hortago gudbinta taabashada (iyo gudbinta dhabarka) ee shaqaalaha caafimaadka ilaa dhaawaca qaliinka bukaanka inta lagu jiro qaliinka. Caqabadda ugu weyn ee fayraska ayaa ah in laga ilaaliyo shaqaalaha caafimaadka inay la xiriiraan dhiigga iyo dareeraha jirka bukaannada, kuwaas oo fayraska sido si uu u keeno caabuq u dhexeeya dhakhaatiirta iyo bukaanka. Caqabadda qaybtu waxa ay tilmaamaysaa ka-hortagga fayraska hawada laga qaado ee qaabka neefsashada hawada ama u hoggaansanaanta nuugista oogada maqaarka ee jidhka bini'aadamka.
Raaxada Dharka Ilaalinta ee La Tuuri karo: Raaxada waxaa ka mid ah xajinta hawada, gelitaanka uumiga biyaha, dahaarka, tayada, dhumucda dusha sare, waxqabadka korantada, midabka, milicsiga, ur iyo dareenka maqaarka. Waxa ugu muhiimsan waa qulqulka iyo qoyaanka qoyaanka. Si loo wanaajiyo saamaynta ilaalinta, dharka difaaca ayaa inta badan ah laminate ama laminate, taasoo keentay qulqulo dhumuc iyo liidata iyo qoyaanka qoyaanka. Xirashada muddada-dheer maaha mid ku habboon dhididka iyo kulaylka. Shuruudda antistatic waa in laga hortago in korontadu ay ka baxdo qolka qalliinka inay nuugo xaddi badan oo boodh iyo bakteeriyo ah dharka qalliinka, taas oo waxyeello u leh dhaawaca bukaanka, iyo in laga hortago dhimbiil ka yimaada koronto joogto ah oo qarxisa gaaska kacsan. qolka qalliinka oo saameeya saxnaanta qalabka saxda ah.
Guryaha jireed iyo makaanikada: Guryaha jireed iyo farsamada inta badan waxay tixraacaan iska caabbinta jeexjeexa, caabbinta dalool iyo xidhashada caabbinta agabka ilaalinta la tuuri karo. Ka fogow jeexjeexa iyo daloolada si aad u siiso marin ay bakteeriyada iyo fayrasyadu ku faafto, oo xidhashada iska caabbinta waxay ka ilaalin kartaa inay soo dhacaan kooxda inay siiyaan meelo ay bakteeriyada iyo fayrasyadu ku tarmaan.
Suit gooni-gooni ah oo la tuuri karo
Suit gooni-gooni ah oo la tuuri karo: Dharka ilaalinta ee shaqaalaha caafimaadka (dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha caafimaadka, shaqaalaha caafimaadka dadweynaha, shaqaalaha nadaafadda, iwm.) iyo dadka galaya meelo gaar ah oo caafimaad iyo kuwo caafimaad ah (tusaale, bukaannada, booqdayaasha isbitaallada, dadka galaya meelaha uu cudurka qabo, iwm.).
Suit gooni-gooni ah oo la tuuri karo: Waxay ka hortagi kartaa gelitaanka biyaha, dhiigga, khamriga iyo dareeraha kale. Waxay leedahay hydrophobicity ka sarreeya fasalka 4, si aanay u wasakhayn dharka iyo jidhka bini'aadamka. Ka fogow dhiigga bukaanka, dareeraha jidhka iyo dheecaanka kale inta lagu jiro qaliinka waxay u qaadi doonaan fayraska shaqaalaha caafimaadka. Waxay xannibi kartaa bakteeriyada iyo fayrasyada.
Gowns Ka-hortagga Kiimikada
Gowns Ka-hortagga Kiimikada: Waxay ka hortagi kartaa gelitaanka biyaha, dhiigga, khamriga iyo dareerayaasha kale. Waxay leedahay hydrophobicity ka sarreeya fasalka 4, si aanay u wasakhayn dharka iyo jidhka bini'aadamka. Ka fogow dhiigga bukaanka, dareeraha jidhka iyo dheecaanka kale inta lagu jiro qaliinka waxay u qaadi doonaan fayraska shaqaalaha caafimaadka. Waxay xannibi kartaa bakteeriyada iyo fayrasyada. Caqabadda ugu weyn ee bakteeriyadu waa in laga hortago gudbinta taabashada (iyo gudbinta dhabarka) ee shaqaalaha caafimaadka ilaa dhaawaca qaliinka bukaanka inta lagu jiro qaliinka. Caqabadda ugu weyn ee fayrasku waa in ay ka hortagaan in shaqaalaha caafimaadku ay la kulmaan dhiigga iyo dareeraha jidhka bukaanka, kaas oo xambaarsan fayraska ka dhasha caabuqa isdhaafka ah ee u dhexeeya......
Dharka ilaalinta madaniga ah ee la tuuri karo
Dharka Ilaalinta Madaniga ah ee la Tuuri karo: Dharka ilaalinta ee shaqaalaha caafimaadka (dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha caafimaadka, shaqaalaha caafimaadka dadweynaha, shaqaalaha nadaafadda, iwm.) iyo dadka galaya goobaha caafimaadka iyo kuwa gaarka ah (tusaale, bukaannada, booqdayaasha isbitaallada, dadka galaya meelaha uu cudurku ku dhacay, iwm.). Shaqadeedu waa in ay go'doomiso bakteeriyada, boodhka ultrafine ee waxyeelada leh, aashitada iyo xalalka alkaline, shucaaca korantada, iwm., hubinta badbaadada shaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka nadiif.
Dharka Ilaalinta Madaniga ah ee la tuuri karo: Waxay ka hortagi kartaa dhexgalka biyaha, dhiigga, khamriga iyo dareeraha kale. Waxay leedahay hydrophobicity ka sarreeya fasalka 4, si aanay u wasakhayn dharka iyo jidhka bini'aadamka. Ka f......
Dharka ilaalinta caafimaadka oo aan cagaha dabooli karin
Dharka ilaalinta caafimaadka ee aan cagaha lahayn: Dharka ilaalinta ee shaqaalaha caafimaadka (dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha caafimaadka, shaqaalaha caafimaadka dadweynaha, shaqaalaha nadaafadda, iwm.) iyo dadka galaya meelo gaar ah oo caafimaad iyo kuwo caafimaad ah (tusaale, bukaanada, booqdayaasha cusbitaalka, dadka galaya meelaha uu cudurku ku dhacay, iwm. ). Shaqadeedu waa in ay go'doomiso bakteeriyada, boodhka ultrafine ee waxyeelada leh, aashitada iyo xalalka alkaline, shucaaca korantada, iwm., hubinta badbaadada shaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka nadiif.
Dharka ka-hortagga caafimaadka ee aan cagaha daboolin: Waxay ka hortagi kartaa gelitaanka biyaha, dhiigga, khamriga iyo dareeraha kale. Waxay leedahay hydrophobicity ka sarreeya fasalka 4, si aanay u wasakhayn dharka iyo jid......
Dharka ilaalinta caafimaadka ee daboolka cagaha
Dharka ilaalinta caafimaadka ee cagaha daboolan: Dharka ilaalinta ee shaqaalaha caafimaadka (dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha caafimaadka, shaqaalaha caafimaadka dadweynaha, shaqaalaha nadaafadda, iwm.) iyo dadka galaya meelo gaar ah oo caafimaad iyo kuwo caafimaad ah (tusaale, bukaanada, booqdayaasha isbitaalada, dadka galaya meelaha uu cudurku ku dhacay, iwm. ). Shaqadeedu waa in ay go'doomiso bakteeriyada, boodhka ultrafine ee waxyeelada leh, aashitada iyo xalalka alkaline, shucaaca korantada, iwm., hubinta badbaadada shaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka nadiif.
Dharka Kahortagga Caafimaadka ee Cagaha Daboolka leh: Waxay ka hortagi kartaa gelitaanka biyaha, dhiigga, khamriga iyo dareeraha kale. Waxay leedahay hydrophobicity ka sarreeya fasalka 4, si aanay u wasakhayn dharka iyo jidhka......
La tuuri karo Pp iyo Pe Nonwoven Acid Coat Buluugga ah ee Caabuda Caafimaadka
La tuuri karo pp iyo pe Nonwoven Acid U adkaysiga Caafimaadka Shaybaadhka Buluugga ah: Dharka ilaalinta ee shaqaalaha caafimaadka (dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha caafimaadka, shaqaalaha caafimaadka dadweynaha, shaqaalaha nadaafadda, iwm.) iyo dadka galaya meelo gaar ah oo caafimaad iyo caafimaad (tusaale, bukaannada, booqdayaasha isbitaalka, dadka soo galaya meelaha cudurku ku dhacay, iwm).
La tuuri karo pp iyo pe Nonwoven Acid U adkaysiga Caafimaadka Shaybaarka Buluugga ah: Waxay ka hortagi kartaa dhexgalka biyaha, dhiigga, khamriga iyo dareerayaasha kale. Waxay leedahay hydrophobicity ka sarreeya fasalka 4, si aanay u wasakhayn dharka iyo jidhka bini'aadamka. Caqabadda ugu weyn ee bakteeriyadu waa in laga hortago gudbinta taabashada (iyo gudbinta dhabarka) ee shaqaalaha caafimaadka......
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Dharka ilaalinta la tuuri karo oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Dharka ilaalinta la tuuri karo soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Dharka ilaalinta la tuuri karo la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.